Ukungenisa amanqaku kunye nokuvelisa imodeli yendawo yedijithali kwifayile yeCAD-iGeofumadas
NgoJuni, 2017 AutoCAD-AutoDesk, Okufumaneka, Topography
Nangona okunomdla kuthi ekupheleni komthambo onje ukuvelisa amacandelo eminqamlezo ecaleni kwe-axis yomgca, ukubala inani elisikiweyo, i-embankment, okanye iiprofayile ngokwazo, siza kubona kweli candelo ukuveliswa kwemodeli yendlela yedijithali ukusuka umzuzu wokungenisa amanqaku, ukuze uphinde uphindwe ngomnye umsebenzisi. Njengoko imiyalelo ye-AutoCAD ngesiNgesi ithandwa kakhulu, siya kuthi siyikhankanye ngesiNgesi.
Siza kwenza lo msebenzi sisebenzisa i-CivilCAD. Ukuba awunayo, ekugqibeleni sikubonisa indlela yokukhuphela.
Ukuba ufuna ukuphuhlisa lo msebenzi uhamba ngesinyathelo, ungasebenzisa ifayile yesampuli ebizwa ngokuba amanqakuSB.txt, ekupheleni kwinqaku kunokubonisa indlela yokufumana ngayo.
I-CivilCAD ingangenisa izilungiso kwifomathi yendawo ukusuka kwisiqendu sesahlulo esihlukeneyo, kulo mzekelo siza kusebenzisa idatha ukusuka kwiseshoni eye yenziwe kwifayile ye-txt, apho amaphuzu ahlukaniswe ngamakholomu, kwifomethi elandelayo: Inombolo yepaji, X ulungelelaniso, u-Y ulungelelaniso, Ukuphakama kunye neenkcukacha.
4 469 1655898.508 295.85 XNUMX Ucingo
5 6998 1655900.653 296.2 XNUMX Ucingo
Oku kwenziwa nge: CivilCAD> Amanqaku> Indawo> Ngenisa
Kwiphaneli eboniswayo, sikhetha ukhetho nXYZ, ekubeni sinomdla wokungenisa iinkcazo, sikhetha inketho yokuchazwa kwengcaciso.
Sakhetha ukwamkela, kunye neqhosha OK Kwaye sakhetha ifayili, ekubhekiselwe kulo ngolu hlobo «amanqakuSB.txt«. Inkqubo iqala ngokungenisa amanqaku kwaye emva kwemizuzwana embalwa, umyalezo kufuneka uvele ezantsi ubonise ukuba mangaphi amanqaku angenisiwe. Kule meko kufuneka ibonise ukuba ingenise amanqaku angama-778.
Ukuze ukwazi ukubona amanqaku, kuyafuneka ukuba wenze uhlobo olwandisiweyo lokuSondeza. Nokuba zi icon efanelekileyo okanye kwikhibhodi usebenzisa Z> ngenisa> X> ngenisa.
Ubungakanani bamaphuzu buxhomekeke kwindlela oqwalasele ngayo, ukutshintsha oku kwenziwayo Ifomathi> Uhlobo lwenqaku, okanye usebenzisa umyalelo ddptype.
Ukuba ufuna ukuwabona ngobukhulu obuboniswe kumfanekiso, sebenzisa uhlobo lwenqaku olubonisiweyo kunye nobukhulu beeyunithi ezipheleleyo ze-1.5.
Njengoko ubona, onke amanqaku angenisiwe, kwaye ngasemva kwaloo nkcazo yabhalwa phantsi kwimeko yabo babenayo.
Kwakhona ubone ukuba amanye amanqanaba adalwe ngokwemiqathango engeniswayo:
CVL_PUNTO iqulethe amanqaku
CVL_PUNTO_NUM iqulethe inkcazo
CVL_RAD ingaba neenkcukacha zeengongoma zolu vavanyo.
Umbala wamanqanaba unokuguqulwa, kunye nombala weengongoma xa ugqithisa ukusuka kwintshintshi ukuya kwi-ByLayer, ukuze bafumane umbala woluhlu kwaye kulula ukubonwa.
Ukuba uneskrini se-AutoCAD esimhlophe, ungayitshintsha ibe ngumnyama Izixhobo> Khetha> Umboniso> Imibala ... Kwimibala engummnyama mnyama kuya kuba lula ukujonga izinto ngeembala ezikhanyayo ezifana nohlobo oluphuzi.
Ngoku kufuneka siguqule iingongoma esizingenisayo kwimodeli yendawo yedijithali. Ngenxa yoku, kufuneka sicime iileya esingazifuniyo.
Oku kwenziwa ngokusebenzisa inkqubo:
CivilCAD> Imaleko> Ikhefu livuliwe. Emva koko sichukumisa inqaku kwaye singena. Ngale nto, kuphela umaleko wamanqaku ekufuneka ubonakale. Kwakhona kwinyathelo elilandelayo kufuneka ukuba onke amanqaku abonakale.
Ukuvelisa i-triangulation esenzayo:
CivilCAD> I-Altimetry> Unxantathu> Indawo. Iphaneli esezantsi iyasibuza ukuba siyafuna na ukuyenza ngokusekwe kumanqaku akhoyo okanye kwimigca yolayini esele idwetshiwe kwimephu. Kuba izinto esinazo ngamanqaku, sibhala i ileta P, ngoko senza faka. Sikhetha zonke izinto kwaye emazantsi kufanele ukuba isixelele ukuba kukho amanqaku angama-778 akhethiweyo.
Kwakhona senza faka, kwaye le nkqubo iyasibuza ukuba ngowuphi umgama esiza kuwusebenzisa kulungiso loonxantathu kwiindawo ezijikelezayo. Kule meko siya kusebenzisa 20 mitha, becinga ukuba uphando lwenziwe ngegridi malunga neekhilomitha ezili-10.
Sibhala 20, ngoko senza faka.
Sichaza njengendlela engancinane 1 iqondo, senza faka kwaye oku kufuneka kube ngumphumo:
Uluhlu olubizwa ngokuba yiCVL_TRI equkethe ubuso obuyi-3D luye lwadalwa.
Ukuvelisa iiNqanaba zeNqanaba
Enye yezona zinto zibalulekileyo kwimodeli yedijithali yokuboniswa kwemveliso ivelisa imigca yentsontelo. Oku kwenziwa nge: I-CivilCAD> iAltimetry> Imigca ejikelezayo> indawo
Apha sichaza ukuba ii-curves zamibini (ezibizwa ngokuba yi-CivilCAD ezincinci) zizonke kwiimitha ze-0.5 kwaye eziphambili (ezinzima) kwiimitha ezili-2.5 nganye.
Kwaye ukuba iifowuni zihlulwe kwii-vertices siya kusebenzisa i-4.4 kwaye umphumo kufuneka ube ngumfanekiso oboniswe ngezantsi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Amanyathelo ukwenza imephu usebenzisa drones
Post Next … Kwaye iigeoblogger zihlanganisene apha…Okulandelayo »
Ukuphendula ku "Ngenisa amanqaku kunye nokuvelisa imodeli yendawo yedijithali kwifayile yeCAD"
I-RAIMUNDO NONATO IQALA I-DA SILVA uthi:
u-contemporary muito trabalha com vcs